Wararkii u dambeeyey Khasaaraha ka dhashay qarixii ka dhacay Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa ayaa lagu weeraray Hoteel uu daganaa Taliyaha Ciidanka dhulka Sareeyo Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo Taliyaha ciidanka qeybta 21 aad Cabdicasiis Qooje,waxaana lagu dhuftay Gaari yaallay Banaanka Hotelka ay deganaayeen.
Wararka laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxaas ayaa waxa ay sheegayaan in 8 Ruux oo isugu jiray Askar iyo dad Shacab ah oo fadhiyey banaanka Hotelka ay ku geeriyoodeen tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Saraakiil ka tirsan Taliska qeybta 21aad ee xoogga dalka ayaa waxaa ay sheegeen in weerarkaasi qaraxa ah ay ka badbaadeen Taliyaha Ciidamada Dhulka iyo taliyaha qeybta 21aad,hayeeshee ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan Ciidamadii la socday.
Wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo qeybta Galmudug ayaa waxaaay sheegayaan in ciidamada dowladdaay howlgallo ka wadaan Xaafadaha ku dhow dhow hotelka la weeraray oo ay degan yihiin Taliyaha Ciidanka dhulka Sareeyo Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo Taliyaha ciidanka qeybta 21 aad Cabdicasiis Qooje.
Wasiiro looga yeeray golaha Shacabka & Su’aalo adag oo la weeydiinayo